Ziyini izinzuzo zamakhamera wokuqapha amandla we-Solar Panel Power? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ziyini izinzuzo zeAmandla eSolar Panel SukuleleCameras?
Idizayini yamandla aphansi isetshenziswa kabanzi kwimikhiqizo ephathekayo nephathekayo, futhi le mikhiqizo ayihlali inamandla anele. Zivame ukunikwa amandla ngamabhethri, ngakho-ke okwethuSolar Panel Power SukuleleCameraszivela kuyo yonke imininingwane Cabanga ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla ukunweba impilo yebhethri ngangokunokwenzeka.
Kusebenza ezindaweni ezahlukahlukene zokufaka: kungabhekwa endle ngaphandle kukagesi (imigwaqo yasemakhaya, izindlu zasemapulazini, izindlu zezindlu, amachibi ezinhlanzi, izingadi zezithelo, izindawo zokwakha, izimayini, njll.).
Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi: Uma umuntu edlula ngamamitha ayi-5-8 ebangeni lokukhanyisa kwekhamera, ikhamera izovuka kungakapheli umzuzwana owodwa, iphile ukuqoshwa kwevidiyo yesikhathi sangempela, bese ithumela i-alamu kuhlelo lokusebenza lweselula ukucindezela imininingwane ye-alamu ngenkuthalo umsebenzisi. Uma kungadluli muntu, ikhamera ikwimodi yokulinda futhi isebenzisa amandla aphansi.
Ukunikezwa kwamandla amabili: Ikhamera yelanga thinaes Samaphaneli we-olarnamabhethri wokuphakelwa kwamandla kahulumeni ohlangothini lunye. Ebusuku, ukunikezwa kwamandla ebhethri kuyasebenza, futhiSiphaneli ye-olarishaja ibhethri uma libalele. Ukuze kutholakale ukuhanjiswa kwamandla.
Ngabe i-CATV system Wiring injani?